Famoretana ny fanadihadiana Hadoop | ITS Training
Hri ः AK
Tetik'asa fanompoana ITIL (SS)
Fitaovana ampiasaina amin'ny ITIL (SD)
Tetezamita amin'ny fanompoana ITIL (ST)
SOIL Intermediate SOA
Mpanafika Network Certified (CND)
ECSA v10 (Mpikaroka momba ny fiarovana ara-drafitra EC-Council)
LPT (Licensed penetration test)
Ny EC-Council Certified Programme Secure (ECSP.net)
Ny EC-Council Recovery Professional (EDRP)
EC-Council Specialist Security Specialist (ECSS)
Mpanara-maso akaiky ny EC-Council (ECIH)
EC-Ratsy manam-pahaizana manokana momba ny fanoratana (ECES)
Ny mpiandraikitra ny filaminana momba ny fiarovam-baovaon'ny EC-CE (ECC)
Ny EC-Council Certified Programmer'ny fiarovana (Java)
Mpikambana mpampiasa fiarovana azo antoka (CSCU)
CAST 612 Advanced Mobile Forensics sy ny fiarovana
CAST 613 Famakiana sy fampiasana ny tranonkala / tranokala Internet
CAST 616 Mitahiry Windows Infrastructure
BlueCat Security sy Advanced Configuration
Administratika sy Operation ArcSight Logger
Jereo ny Point Certified Security Administrator R80
Jereo ny Point Certified Security Expert (CCSE)
TRITON APPI-DATA Administrator Kurs
TRITON AP-EMAIL Administrateur
Fanamarinana momba ny teknikam-pampianarana fampandrosoana (CATT)
Certificat psychometrique test professionnelle (CPTP)
Mpanjifa mpamorona / manam-pahaizana certificat (CPCD)
Certified Professional amin'ny HR Analytics (CHAMP)
Mpandinika ara-drafitra momba ny fampandrosoana (CODA)
Ny mpandinika ara-tsosialy (CRA)
OD Intervention Professional Certified (CODIP)
Ny mari-pahaizana momba ny balanina azo antoka (CBSCP)
Mpanazava Zoloa sy Life Coach (CELC)
Mpandraharaha momba ny varotra HR (CHRBP)
Mpanazava Lalàna momba ny fampianarana (CID)
Mpitantana fianarana sy fandrindrana mari-pahaizana (CLDM)
HP Testing Software
Ranorex v8.x (fototra mankany Advanced)
Mianara momba ny fampiofanana AWS
Fampiofanana ara-teknikan'ny AWS
Ny famoronana Cisco Nexus 9000 Switches amin'ny ACI Mode v2.0
Mampifanaraka ny Cisco Nexus 9000 amin'ny NX-OS Mode (C9KNX)
CCNA mivezivezy & Switching v3.0
CCNP mivezivezy sy mifamadika
Hamaky ny tohiny JS
Fampidirana ho an'ny programa
Sélénium amin'ny epochs aloha
Fampiofanana ho avy
Famoretana ny fanadihadiana Hadoop Resadresaka - inona no tokony ho fantatrao sy ataonao?
Famoretana ny fanadihadiana Hadoop
Inona ny momba an'i Hadoop?
Ahoana no hanampiana an'i Hadoop?
Soso-kevitra sy tricks mba haka ny tafatafa Hadoop
Apache Hadoop dia malalaka, loharanom-baovao; Ny rafitra fandaharan'asa Java mifototra indrindra amin'ny fandaharam-potoana ho an'ny tahirin-tsakafo ary famelabelarana ny famerana ny fampahalalam-baovao amin'ny ankapobeny fantatra amin'ny anarana hoe Big Data. Azo heverina ho toy ny safidy manara-penitra ny anjaranao mba hampiroboroboana fotoana tsy mitsaha-mitombo ny fampahalalam-baovao momba ny Hadoop sy ny fampiharana azy mba hahitanao vokatra amin'ny famoretana ny tafatafa ho an'ny mpandrindra Hadoop.
Ao anatin'ireo andinin-tsoratra masina manaraka ireo, dia tokony haka an-keriny isika amin'ny ampahany amin'ny foto-kevitra manan-danja izay tsy maintsy tadidinareo raha toa ka maniry ny hibodo ny fibodoany sy ny fanararaotam-pahefana ho toy ny mpandrindra Hadoop.
Raha toa ka mbola vaovao tanteraka amin'ity lohahevitra ity ianao dia andeha isika hanomboka amin'ny trangana famokarana entana fa tsy mpandrindra Hadoop. Raha ny marina dia misy fifanoheran-kevitra tsy dia mazava loatra eo amin'ireo roa ireo satria izy ireo dia samy miandraikitra ny fametrahana ny code et programming. Ny tena fahasamihafana dia ny mpandrindra Hadoop dia miasa ao anatin'ny tontolo Big Data. Fampahalalana goavana dia manintona ireo be dia be ny fampahalalana voatanisa ao amin'ny petabytes, exabyte ary zettabyte, izay mihoatra ny fampiharana ny fampahafantarana fampahafantarana fampahafantarana mahazatra.
Ny fomba fijery tsara indrindra an'i Hadopop dia ny fahafahana mandrindra ny fampahalalam-baovao. Ny orinasa miasa any amin'ny fizahan-tany, ny fiantohana ara-tsosialy, ny famatsiam-bola, ny fampandehanana, sy ny sisa, dia mitaky ny Hadoop mba hiandraikitra, hanara-maso, handrava sy handefa vaovao be dia be.
Amin'ny lafiny hafa, Hadoop dia manome tsiny ihany koa. Midika izany fa manome fivoarana tsy tapaka izy satria mihodina haingana mankany amin'ny faritra hafa amin'ny fotoana mahatsikaiky ny tohatra.
Ho an'ny lanjany voalohany dia mila fampahalalana lehibe momba ny prototypes isan-karazany, drafitra, tombontsoa, ​​ny fenitra, sy ny sisa, izay i Hadoop. Arakaraky ny maha-ara-drariny anao indrindra dia tokony hanana fahafahana hampihatra izany fampahalalana izany ianao. Ankoatra izany, dia manatsara ny fahaiza-manaonao mifandray amin'ny tanjona izay ahafahanao manatsara ny fomba fijerinao amin'ny fomba mahomby. Aoka ho fantatra amin'ny toerana misy anao ianao ary aoka hitazona ny tenanao amin'ny famolavolana sy ny andrasana amin'izao fotoana izao. Ataovy ao an-tsaina fa tsy misy mahasolo ny asa miezaka, ary miaraka amin'ireo fitaovana marina sy asa mazoto, dia azonao atao ny mamantatra ny fomba hahafantaranao ny asanao fantasy ho toy ny mpandrindra Hadoop amin'ny fikambanana ambony indrindra.
Innovative Technology Solutions dia orinasa izay manome fampiofanana ho an'ny olona tsirairay, orinasa sy oniversite amin'ny fahaiza-manao IT sy ny fahaiza-miasa. Ankoatra ny fampiofanana ITS dia manana efitrano fanofanana aty amin'ny toeram-piompiana orinasam-pampandrosoana rehetra ao India ho an'ny fanofanana ny orinasa. Hamaky bebe kokoa
Ho lasa mpiara-miasa
B 100 A, tanàn-dehiben'i 1, manodidina ny tilikambo famantarana, Gurgaon, HR, India - 122001
Copyright © 2017 - All Right Reserved - Innovative Technology Solutions | politika fiarovana fiainan'olona.